ऋण सेवा | हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
सदस्यहरुलाई ऋणका माध्यमबाट समृद्ध बनाउन, सदस्यका दैनिक वित्तिय आवश्यक्ताहरुको परिपुर्ति गर्न विभिन्न प्रकारका ऋण सेवाहरु ल्याएको छ ।
ऋणका प्रकारहरु यस प्रकार रहेकाछन् ।
कृषि सम्बन्धी ऋणः
संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र वसोवास गरेको व्यक्तिहरुको आम्दानी र जीवनस्तर उकास्नका लागि मूख्यतया खाद्यान्न वाली, नगदे वाली, पशू तथा पंक्षिपालन, जडीवूटी उत्पादन तथा बजारीकरण आदि सम्भाव्य रहेको क्षेत्रमा लगानी गरिने ऋण यस अन्र्तगत पर्दछ । एक सदस्यलाई अधिकतम रु.६० लाख सम्म यो शिर्षकमा ऋण लगानी गरिनेछ । कुल परियोजनाको ७० प्रतिशत सम्म ऋण लगानी हुनेछ ।
संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र उत्पादनमूलक घरेलू तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई चालू पुंजी र स्थीर पुंजीको लागि ऋण प्रदान गरिनेछ । यस क्षेत्रमा साना होटल, रेष्टुरेन्ट, किराना पसल, सिलाई बूनाई, कपडा, सवारी साधन र्ममत, तालिम केन्द्र लगाएतका व्यवसायिक क्षेत्रहरु व्यवसायीक ऋण अन्र्तगत पर्दछन् । परियोजना हेरी एक सदस्यलाई अधिकतम रु.६० लाख सम्म यो शिर्षकमा ऋण लगानी गरिनेछ । कुल परियोजनाको ७० प्रतिशत सम्म ऋण लगानी हुनेछ ।
यातायात, संचार तथा जनउपयोगी ऋणः
संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र विद्यूतीय सवारी साधन एंव इन्धनवाट चल्ने सवारी साधन, सूचनाको आदान प्रदान गर्न संचार सेवाहरु तथा आम जनतालाई अति उपभोग्य सेवाहरु आदिको लागि उपलव्ध गराईएको चालू पुंजी ऋण र अन्य अल्पसूरक्षित ऋण प्रदान गरिने छ । यस्तो खालको ऋणमा उद्देश्य हेरी ३० देखी ५० प्रतिशत सम्म सदस्यको स्वलगानी हुनुपर्दछ ।
संस्थाले शेयर सदस्यलाई दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने साना प्रकृतिका सरसामानहरु खरीद गर्न आवश्यक पर्ने उपभोग्य ऋणको ठूलो माग रहेको छ । यो मागलाई पूरा गर्न आवास ऋण, ब्यक्तिगत सवारी साधन तथा अन्य घरायसी उपभोग्य सामान खरीदमा ऋण प्रदान गर्ने छ । यस्तो प्रकारको ऋणमा अधिकतम पाँच लाख सम्म लगानी हुन्छ ।
लघुवित्त समूह मार्फत परिचालन गरिने सम्पुर्ण ऋणहरु, संस्थाको प्रतिव्यक्ति औसत लगानी क्षमताको २० प्रतिशत वा तीन लाख मध्ये जुन कम हूनेआउछ सो सिमा रकमसम्मको लगानीलाई लघु ऋण भनिन्छ । सामान्यतया यस्तो ऋण अल्पकालिन अवधिको हुनेछ । व्यक्ति वा समूह जमानीमा लगानी गर्न सकिनेछ ।
घर जग्गा कारोवार ऋणः
घर जग्गाको खरिद बिक्रि वा घर निमार्ण गरी बिक्रि गर्ने वा हाउजिङ्ग व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले सदस्यलाई लगानी गरिने ऋण यस अन्र्तगत पर्दछ । धितो मूल्याँकनको आधारमा लगानी गरिने यस्तो ऋणमा खुद लगानीको ५०%रकम स्व लगानी हुनुपर्दछ ।
वचत/निक्षपको जमानतमा ऋणः
सदस्यहरुले संस्थामा जम्मा गरेको वचत/निक्षपको जमानतमा वचत/निक्षपको अवधि भर सम्मको लागि यस्तो ऋण लगानी हुन्छ । वचतमा जति ब्याज पाईरहेको छ त्यसमा थप २ प्रतिशत ब्याज जोडि संस्थाले लिन्छ । यस्तो ऋणको सिमा भनेको वचत रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्म लगानी गरिन्छ ।
यूवा स्वरोजगार ऋणः
यूवा तथा साना व्यवसायि स्वरोजगार कोष संगको सहकार्यमा १८ वर्ष पुराभई ६० वर्ष ननाघेका सदस्यहरुलाई कृषि उत्पादनहरुको बजारीकरणको लागि ऋण प्रवाह गरिन्छ ।
उल्लेखित शीर्षक वाहेक सदस्य शेयरधनीबाट ऋण माग भएमा पनि आवश्यकता तथा सम्भाव्यताका आधारमा ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ ।
ऋण प्रवाह सीमाः
संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको स्वीकृत गर्ने अधिकार निम्न बमोजिम हूनेछः
स्वीकृत गर्ने अधिकारी रकम रु.
क) कार्यकारी प्रमुख २५ लाखसम्म
ख) ऋण लगानी तथा अशूली उपसमिति ५० लाखसम्म
ग) सञ्चालक समिति ५० लाखभन्दा माथी
ऋण लिनका लागि अयोग्य सदस्यहरुः
(क) विश्वसनीयतामा सदस्य शंकास्पद भएका, भूक्तानी सामर्थता नदेखिएका वा वित्तीय स्थिति कमजोर हूदै गइरहेका र भविष्यमा पनि सोमा सूधार हून सक्ने सम्भावना कम देखिएका सदस्यहरु ।
(ख) संस्थासंग भएको कबूलियत, मन्जुरनामा, करार, सम्झौता वा अन्य लिखित अनूसार बदनियतपूर्ण ढंगले ऋणको भूक्तानी निश्चित अवधिभित्र नगरेका वा गर्न आलटाल गरी राखेका सदस्यहरु ।
(ग) संस्थासंग धितो वा सूरक्षण वापत राखिएका मालसामान वा चल अचल सम्पत्ति वा अन्य सम्पत्तिको बजार भाउ घट्न गई संस्थालाई थप धितो वा सूरक्षण दिन आलटाल गरिरहेका वा दिन नचाहने सदस्यहरु ।
घ) कुनैपनि बैंक वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिई कालोसुचिमा परेका सदस्यहरु
ङ) यस नीतिको अन्य परिच्छेद र प्रावधानहरुबाट अयोग्य ठहरिएका सदस्यहरु ।
च) अधिकार प्राप्त अधिकृत वा संचालक समितिबाट अयोग्य तोकिएका अन्य सदस्यहरु ।
ऋण प्रवाह सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरुः
ऋण लगानीका लागि आवश्यक श्रोत सदस्यहरुले जम्मा गरेको वचतबाट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कैयन सदस्यहरुले खाइ नखाई दुःख गरेर जम्मा गरेको सम्पतिको सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दै ऋण प्रवाह गर्दा निम्न व्यवस्था पुरा गरेरमात्र लगानी गरिनेछ ।
१) ऋणी सदस्यले ऋण अवधिभर आफ्नो नाममा देहाय बमोजिम शेयर कायम गर्नूपर्नेछ ।
रु.२ लाख सम्मको ऋणमा ऋण रकमको रु.१० हजार वा ५ प्रतिशत मध्ये जुन बढी हून्छ सो बराबरको शेयर खरिद गरेको हुनुपर्दछ ।
रु. २ लाख १ देखी १० लाख सम्मको ऋणमा धितो भएमा ५ प्रतिशत र धितो नभएमा ऋण रकमको १० प्रतिशत शेयर खरिद गर्नूपर्दछ ।
रु.१० लाख भन्दा माथिको ऋणमा अवस्था हेरी ३ देखी ५ प्रतिशतको शेयर खरिद गर्नू पर्दछ ।
२) वचत गरेको हूनूपर्ने ।
नियमित वचत कम्तिमा ३ महिना देखी लगातार गरेको हूनूपर्नेछ ।
सामूहिक जमानीमा लगानीहूने ऋणमा लगानीहूने ऋण रकमको १० प्रतिशत रकम बचतमा जम्मा भएको हूनूपर्नेछ ।
Email: jhcoopl[email protected]